Xilkasnimo la'aantaada: Puntland, sharci la’aanta oo sharci noqotay! (Q3) – Puntland Post
Posted on October 9, 2019 October 9, 2019 by Liban Yusuf
Xilkasnimo la’aantaada: Puntland, sharci la’aanta oo sharci noqotay! (Q3)
Magaalada London waxaa ku nool 17 million oo ruux marka lagu daro dadka gobollada ka soo shaqa taga, Qaahira-na waxaa ku nool 10 million halka magaalada Nairobi lagu sheego 6 million marka lagu daro iyana dadka uga soo shaqo taga deegaanada ku xeeraan,waa magaalooyin waaweyn,dad tira badan baa ku nool wax walbaana sidii la rabay ayey u shaqaynayaan,matoorka dhaqaajiya ee wax socodsiinayaana waa ammaanka oo la sugay iyo nimaadka iyo kala danbaynta oo shaqaynaya!.
Ammaankoodaa sugan, dhinacyada ayey isku hayaan, mana jiraan wax is diidan haddiise ay dhacdo in qalad yimaado,waxaa saxaya hay’adaha u xil saaran,laakiin rukunka ugu xoogga badan waa in la ilaaliyo ammaanka dalka iyo dadka,waxaana laga yabaa mararka qaar inaadba arki weydo cidda ammaanka sugaysa,cajiib malaayiin dad ah ayaa is dhex maraya haddana looma jeedo cidda ammaanka sugaysa!.
Sadexdaan magaalo madax mid ka mid ah Soomaaliya ayey deris la tahay ,waxaana ku nool dad badan oo Soomaali ah ganacsiyo waaweyna ku leh, su’aasha mar walba soo noq noqonaysa ayaa waxay tahay maxaa Soomaalidu sida ay gacanacsiga ugu dhiiradaan goobaha halistaana uga raadiyaan oo weliba dad badani ku dhintaan ay ugu dhiiran waayeen ilaalinta sharciga iyo sugidda ammaanka dalkooda iyo magaalooyinkooda?.
Muddo aad u dheer ayaa dadku sharci darro deris la ahaayeen,waxaana mararka qaarkood jebinta sharciga qayb ka ah masuuliyiinta loo igmaday ilaalinta sharciga iyo dhowrista ammaanka, ma oran karaa sharciga ayeysan aqoon, maya! marka ay ugu yaraadaan marka laga soo tago aqoontoodu inta ay le’egtahay waxaa ay si fiican uga dheregsan yihiin waxyaaha asaasiga ah, waxaa jirta hagar gundhigeedu yahay bur burka dalkeena iyo kan maskaxeed oo kaashanaya ilbaxnimo la,aan, waxaa jirta cid inaga oo dhan aan sugayno sharciga iyo kala danbayntana soo celin doonta, Goorma? Yeysa yihiin!?.
Dhibta ugu weyn ee magaalooyinka Puntland soo food saartay ayaa noqotay baabuurta aan taarikada lahayn iyo kuwa bacaha madow lagu dahaaray,waxaana labaduba caqabad ku yihiin ammaanka dadka, dalka iyo weliba anshaxa dhallinta soo koraysa.
Waxaa jira dhacdooyin yaab iyo xanuun badan oo inta badan ay gaystaan baabuurta aan taarikada lahayd iyo kuwa bacaha madow lagu dahaaray,iyadoo inta badan marka dhacdooyinku dhacaan si sahlan dadku uga sheekaystaan laakiin aysan jirin wax talaabo ah ama falcelin lagaga hor tegayo dhibaatooyinka baabuurtaan iyo dadka wataa gaystaan.
Bartamihiin sanadkii aan soo dhaafnay ayey ahayd markii nin ka soo jeeda gobollada waqooyi galbeen Soomaaliya uu gaari kala soo degay dekada magaalada Boosaaso,waxaana shaqsigan oo ganacsade ahi uu safarkiisa ka soo bilaabay magaalada Boosaaso,waxaana uu ku tegay magaalada Gaalkacayo,bar kasta oo kantarool oo uu soo istaago waxaa laga qaadayey birta isaga oo salaan masuul la siinayey,ninkaan ayaa dib ugu soo laabtay magaalada xarunta ah ee Garoowe waxaana uu ganacsato saaxiibadiisa u sheegay sida wax u dhaceen waxaanu dhiiri geliyey in arintani ammaanka halis ku tahay lagana hor tago,dabcan lexejeclo ayaa deegaanka ka haysay walow uu u dhashay gobolada Waqooyi safarkiisuna waxaa uu ahaa mid tijaabo ah.
Waxa iyana dhowaan ka dhacday sida la ii sheegay magaalada Gaalkacayo darawal wata baabuurta bacahu ku dahaaran yihiin taarikana aan lahayn ayaa jiiray ilmo yar waana ka cararay ilmaha yar oo dhaawac ah,aabaha dhalay ilmahan ayaa joojiyey gaari u eg kii wiilkiisa jiiray ee nooca Toyota Hilux loo yaqaan, inta badana ay wataan hay’adaha dawladu waxa uuna ka dejiyey darawalkii waday isagoo isticmaalayey qori caaraddii waxaanu ku xeraystay gurigiisa, muddo dheer ayuu gaariga gurigiisa ku haystay aakhirkiina wada hadal ka dib waxaa laga soo qaaday gaarigii waxaana la siiyey magdhowga ilmihii laga dhaawacay,haddii uu taariko lahaan lahaa ma carareen isla markiiba waa la garan lahaa aabaha ilmaha dhalay sharciga ma jebiyeen qorina ma isticmaaleen.
Sidaasi si la mid bartamihii bishii hadda aan ka soo gudubnay magaalada Garoowe xarunta ah ayaa kaalin shidaal waxaa soo istaagay baabuur nooca aan taarikada lahayn ah,waxaa uu ka buuxsaday shidaal horay ayuuna uga xawaareeyey ganacsadihii shidaalka lahaa oo sii eegaya waxna aan qaban Karin,waxaa arrintaan shakigeedu soo galay nin dhalin yaro ah oo watay gaari aan taariko lahayd oo u eg kii cararay hase ahaatee dhaar ayuu ka maray,cajiib bal yaa celinaya taariko ma leh, kaamira qabataana meesha kuma taal.
Waxaa iyana murugo iyo raad reeb xun leh in baabuurta bacaha madow loo isticmaalo waxyaabo dhaqanka iyo anshaxa wanaasan wax u dhimaya,waxaana la ii sheegay in rag dhalin yaro iyo waayeelba leh ay baabuurta bacda madow ku dahaaran tahay ku ugaartaan lana istaagaan iskoolada hortooda iyagoo xoogaa sunuud ah isticmaalaya si ay u marin habaabiyaan uga qaraabtaan gabdhaha yar yar ee iskoollada ay u soo dirsadeen hooyo iyo aabe jecel kuna han weyn, malaha kuwani gabdho ma dhalin lamana dhalan.
Sidoo kale waxay istaagaan guryahaya hortooda waxaana laga yaabaa aabe ama hooyo shaqo ka timid gaariga horteeda taagan ay ku jirto gabadhooda oo shaydaan bacaha u soo madoobaystay taarikadana u soo furtay.
Mid ka mid ah madaxdii wasaarada warfaafinta ee xukuumaddii C/weli Gaas ayaa noo sheegay mar ay waraysi ugu tageen taliska Ciidamada booliiska Puntland waxna ka weydiinayeen arinta taariga la’aanta uu soo arkay gawaarida masuuliyiin booliiska taargadooda oo dhex daadsan xafiiska taliska ciidamada Booliiska malaha hay’adaha kalena waa la mid, laakiin booliisku waa sharcigii oo sharciga ku tuntay.
Ilaa hadda ma cadda sababta dhabta ee sharci darada intaas le’eg loo jideeyey waxaase masuulyiinta qaarkood ku doodaan inay arintaan ugu talaabsadeen arrimo iyaga ammaankooda quseeya, aysanna doonayn in la ogaado taarikada baabuurka ay wataan su’aasha is weydiin leh ayaa waxay tahay intee baabuur ayaa taarikadu ka furantahay ama bacahu ku dahaaran yihiin marka lagu daro kuwa musuuliyiintu wataan ee ay sharciga u jebiyeen?. Fili mayo in masuuliyiintani baqdin sharciga u jebiyeen maxaa yeelay kaneecaba si sahlan ayey u dili kartaa.
Marka laga soo tago ciidamada booliiska iyo kuwa waddooyinka waxaa jira ciidamo qarsoon oo sugga ammaanka waana kuwa inta badan saldhiga u ah nabad gelyada dal Qaran jira leh, hase ahaatee in kastoo aynaan lahayn haddiiba ay jiri laayeen maxaa laga qaban karaa haddii la sharciyeeyey sharci la,aantii dadkiina ayan ka hadlayn dhibaatan ammaankooda halista ku ah.
Kolka aad tagto gobolada waqooyin ee dalka Soomaaliya ayaadan marnaba arkay baabuur aan taariko lahayn,waxaa iyana sidaas oo kale la ii sheegay inaan magaalada Muqdisho lagaba aqoon,maxay ku dhacday in Puntland sharci daradda saldhig u noqoto?.Golaha wasiirada ayaa inta badan afka ka sheega inaan baabuur taariko la’aan ah la wadan karin hase ahaatee waa hadal afka laga yiri oo maysan qaadin talaabo la taaban karo laguna joojinayo arrintaan.
Dhowaan ayey kolkii la soo saaray waraaq dadka loogu sharciyeynayo baabuurta bacaha madow ku dahaaran yihiin qofkii doonayaana uu iska bixi karo $50 dolar, waxayna u egtahay inaan si qoto dheer arrintaan looga baaraan degin.
Markii ay soo baxday warqada lagu sharciyeynayo ku dahaarida baabuurta bacaha madow ayaan arintaan wax ka weydiinay mid ah madaxda sar sare ee ciidanka Booliiska Puntland waxaana uu noo sheegay in arrintaasi ay golaha wasiirada ka timid iyaga ka booliis ahaana aysan shaqo ku lahayn, waxaase ka muuqatay inuu ka xumaa warqada soo baxday,masuulkaan oo diiday in magiciisa la shaaciyo ayaa hadalkiisa raaciyey arrintaas ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn.
Waa xilkasnimo la’aan in dadka ku dhaqan Puntland markhaanti ka ahaadaan sharci daraddii oo sharci laga dhigay, waxaa muhiim ah inay arintaan diidaan kana hor yimaadaan, iyagoo ku xisaabtamaya arrintani raadka ay ka tegayso una danaynaya deganaashaha ay haystaan iyo mustaqbalka da’yarta soo kacaysa.
Xilkasnimo la’aantaada la soco qaybta 4aad.